March 10, 2020 - Myitter
သင်္ကြန်ကိုတားပိုင်ခွင့် မရှိသကဲ့သို့ ပိတ်ပိုင်ခွင့်လည်း မရှိဟု ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ပြော …..
March 10, 2020 Myitter 0
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရိုးရာအတာသြင်္ကန်ကို တားပိုင်ခွင့်မရှိသကဲ့သို့ ပိတ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဟု ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောသည်။ မတ် ၈ ရက်က ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ၃၁ လမ်းနှင့် ၃၂ လမ်းကြားရှိ နောက်ဖေးလမ်းကြား ဥယျာဉ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား မစတင်မီ မီဒီယာများ၏မေးမြန်းမှုကို ၎င်းက အထက်ပါအတိုင်းပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “သြင်္ကန်လုပ်မယ်လို့ပြောထားတယ်။ သြင်္ကန်မလုပ်နဲ့လို့တားလို့မရဘူး။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်တားပိုင်ခွင့်မရှိဘူး၊ […]
အရှင်ဘုရားတဲ့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ သေရင် ဘာဖြစ်မလဲ ဘယ်လို ယုံကြည်ကြလဲတဲ့
New York မှာ ဘယ်သူမှ မမျှော်လင့်ဘဲ အမေရိကန်ဒကာလေးတစ်ယောက်ကို တရား ဟောဖြစ်ပါတယ်။ New York လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က ဦးဇင်းကို လာမေးတယ် – အရှင်ဘုရားတဲ့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ သေရင် ဘာဖြစ်မလဲ ဘယ်လို ယုံကြည်ကြလဲတဲ့။ ဦးဇင်းက ပြောပြတယ် ဒီဘဝမှာ သေရင် နောက်ဘဝမှာ […]
ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို အလှူရှင်တစ်ဦးမှ ကား လှူဒါန်း
ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ်၏ ပါမေက္ခချုပ်ဆရာတော်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်တော်မူခဲ့သည့် ဆရာတော်တစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်….. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဘိဓမ္မာမဟာသိပ္ပံ၊ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်းမြို့) တို့၏ ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဖြစ်ပါတယ်… ဒါ့အပြင် စစ်ကိုင်းမြို့၊ မဟာသုဗောဓာရုံကျောင်းတိုက်၏ ပဓာနနာယကဆရာတော် လည်းဖြစ်ပါတယ်…. အရှင်မြတ်သည် ကျမ်းစာရေးသားခြင်း၊ စာပေပို့ချခြင်း၊ […]
အငြိမ်း စားယူပြီးခဲ့ပေ မယ့် စေတနာ နဲ့တာဝန်ပြန်လည် ထမ်းဆောင်ခဲ့ တဲ့ ဆရာဝန်
အငြိမ်း စားယူပြီးခဲ့ပေ မယ့် စေတနာ နဲ့တာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ခဲ့ တဲ့ ဆရာဝန် ကိုရိုနာ ကူးစက်ရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်” ဝူ ဟန်ဗဟိုဆေးရုံမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဒေါက်တာ Zhu Heping ဟာ ယနေ့တနင်္လာနေ့ မနက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အသက် […]
ရနျကုနျမှာ လမျးစုံ လမျးခှတှကေတောငျးရမျးနတေဲ့ ကလေးတှေ ကို ပိုကျဆံမပေးသငျ့ကွောငျး. ရေးဖူးတယျ…အဆိပျပငျ ရမေလောငျးပါနဲ့..
ရန်ကုန်မှာ လမ်းစုံ လမ်းခွတွေက…တောင်းရမ်းနေတဲ့…ကလေးတွေ..ကိုပိုက်ဆံ…မပေးသင့်ကြောင်း…ရေးဖူးတယ်… ကိုယ်တိုင်လည်း…မပေးတာ ကြာပြီ….သူတို့ ဈေးကွက်က ကြီးတယ်…ကလေး အဌားအရမ်းတွေ လည်း ရှိတယ်… ထိန်းချုပ်လို့ လည်းမရဘူး…လူ့အခွင့်အရေး ဘာညာ ရှိနေတော့…စည်ပင်ကလည်း…ဒီအတိုင်းကြည့်နေရတယ်… သူတို့ကို ထိန်းချုပ်လို့ ရမယ့်……နည်းလမ်းသည်..ပြည်သူပဲ…ဘယ်သူမှ မပေးရင်….သူတို့ ငွေလွယ်လွယ် မရဘူး… အဲ့တာဆို အလုပ်လုပ်ရတော့မယ်…ကြိုးစားချင်စိတ် ရှိလာမယ်… အလွယ်လမ်းတောင်းစားတဲ့ သူတွေနည်းလာမယ်..ခိုင်းစားလို့ […]
အီတလီတစ်နိုင်ငံလုံးကို lockdown ချလိုက်ပါပြီ…
အီတလီတစ်နိုင်ငံလုံးကို lockdown ချ ရောမ၊ မတ် ၁၀ COVID-19 ပြန့်နှံ့ကူးစက်မှုကို တိုမြှင့်ထိန်းချုပ်သည့်အနေဖြင့် အီတလီတစ်နိုင်ငံလုံးကို lockdown ချလိုက်ကြောင်း အီတလီဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ Giuseppe Conte က ကြေညာလိုက်သည်။ လူစုလူဝေးပြုလုပ်ခြင်းများအားလုံးကို တားမြစ်ပြီး၊ အားကစားပြိုင်ပွဲများအားလုံးကိုလည်း ဆိုင်းငံ့ထားရန်နှင့် မိသားစုအရေးပေါ်ကိစ္စရှိသူများသာလျှင် ခရီးသွားခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။ ယခုကြေညာချက်တွင် […]
မန်းလေးအမှတ်၁၀ ရဲစခန်းအပိုင်ထဲမှာ ဆိုင်ကယ်လုတာ လည်ပင်းကိုဓားရှည်နဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ထိုးပစ်တယ် …..
မန်းလေးအမှတ်၁၀ရဲစခန်းအပိုင်ထဲမှာ ဆိုင်ကယ်လုတာ လည်ပင်းကိုဓားရှည်နဲ့ရက်ရက်စက်စက် ထိုးပစ်တယ် ဟိုးတုန်း သူခိုးဆိုတာ ပစ္စည်းပဲခိုးတယ်လူကိုမလုပ်ဘူးခုတော့ လူပြတ်နေရာမှာလုတယ်နောက်လူရှုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း လုလာတယ်နောက် ရိုက်လုတယ် ပြီး လုတယ် ဓားနဲ့ထိုးတယ် နောက်ထပ် ဓားနဲ့ထိုး လုတယ်ပိုပိုဆိုးလာတယ်ခုတော့ ဓားနဲ့ထိုးတဲ့နေရာက လည်ပင်းဓားက အတိုမဟုတ် ဓားရှည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လာပြီး အုပ်ချုပ်မှုကင်းမဲ့တရားဥပဒေမရှိတဲ့ အရပ်လိုဖြစ်လာနေပြီ အားလုံး ကိုယ့်အန္တရာယ်အတွက်လက်နက်ဆောင်ထားရမလိုဖြစ်လာနေပြီ […]
မီးလောင်နေတဲ့ အိမ်ထဲကကြောင်လေးကို မရမက ကယ်ခဲ့တဲ့ လေးစားစရာ ခွေးလေး
မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ မတော်တဆ အဖြစ်ပျက်တွေဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အချိန်ခဏလေး အတွင်းမှာ မထင်မှတ်တာတွေက လက်ရှိဘဝကြီးကို ကပြောင်းကပြန် ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့နိုင်ပေမယ့် တခါတလေတော့လည်း ရင်ထဲထိစေတဲ့ အကြောင်းရာလေးတွေက ကြားလိုက်ရသူတိုင်းကို မေတ္တာရောင်ပြန် ဟပ်စေပြန်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းရာက ယူကရိန်းနိုင်ငံ မှာ လတ်တလော ဖြစ်သွားတာပါ။ Donetsk မြို့က […]
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ထက် ကြောက်စရာကောင်း တဲ့ မြန်မာပြည်က လုပ်ငန်းတစ်ခု မှ အဆိပ်
ဒေ သတစ်ခု၏ငါးခြောက်စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်အနီးမှဖြတ်သွား စဉ်လူတစ်ယောက်ဆေးဖျန်းပုံးဖြင့်လှန်းထားသည့်ငါးခြောက်များကို ဖျန်းနေသည်ကိုမြင်ရသဖြင့်အနီးကပ်သွားရောက်မှတ်တမ်းတင်မေးမြန်း ခဲ့ပါသည်။ အလုပ်သမားဟုယူဆရသူပြောပြချက်အရ. ဆေးဖြန်းပုံးတစ်ပုံး တွင်ဖော်ပြပါဆေး(ဒိုင်ကလိုဗော့80%)ပုလင်းဖုံးသုံးရောဖြန်းပါက ယင်နှင့်လောက်မကျကြောင်းပြောပြပါသည်။ ပုလင်းတွင်ရေးထားသည်မှာGHSအဆိပ်ဖြစ်မှုအဆင့်အတန်း(2) ဟုရေးထားရာစားသုံးသူများအတွက်ဘယ်လောက်အန္တရာယ်များမည် ကိုပြောရန်လိုမည်မထင်ပါ။ Source-သတင်းထူးသတင်းဦးများ unicode version ဒေ သတဈခု၏ငါးခွောကျစီးပှားဖွဈလုပျငနျးခှငျအနီးမှဖွတျသှား စဉျလူတဈယောကျဆေးဖနျြးပုံးဖွငျ့လှနျးထားသညျ့ငါးခွောကျမြားကို ဖနျြးနသေညျကိုမွငျရသဖွငျ့အနီးကပျသှားရောကျမှတျတမျးတငျမေးမွနျး ခဲ့ပါသညျ။ အလုပျသမားဟုယူဆရသူပွောပွခကျြအရ. ဆေးဖွနျးပုံးတဈပုံး တှငျဖျောပွပါဆေး(ဒိုငျကလိုဗော့80%)ပုလငျးဖုံးသုံးရောဖွနျးပါက ယငျနှငျ့လောကျမကကြွောငျးပွောပွပါသညျ။ ပုလငျးတှငျရေးထားသညျမှာGHSအဆိပျဖွဈမှုအဆငျ့အတနျး(2) […]
ပုဂံ အာနန္ဒာဘုရား မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ မြင်ကွင်း
ပုဂံ အာနန္ဒာဘုရား မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ အလုအယက်တိုးလုနေကြတဲ့ မြင်ကွင်း ပုဂံ အာနန္ဒာဘုရား မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ မြင်ကွင်းတခု မနေ့ က ပုဂံအာနန္ဒာဘုရားမှာ အများကလှုဒါန်းထားတဲ့ငွေတွေကို အဖွဲ့လိုက်အလုအယက်တိုးယူနေတာတွေ့လို့ ဘာလုပ်ကြတာလဲ မေးတော့ အကြွေလဲတာတဲ့ဗျာ (တချို့ဆို သူတို့လိုချင်တဲ့ငွေစက္ကူကိုရဖို့ထီးနဲ့တောင်လှမ်းယူနေတာမျိုးအထိလုပ်ကြပါတယ်)။ […]